Semalt बाट Go Scraper का एक सिंहावलोकन
Go, Golang को रूपमा पनि चिनिन्छ, प्रोग्रामिंग भाषा केन थम्पसन, रोबर्ट ग्रिसेमर र रोब पाईकले गुगलमा सिर्जना गरेको हो। भाषा शक्तिशाली वेब स्क्रैपर्स र डाटा एक्स्ट्रक्टरहरू निर्माण गर्न वा सिर्जना गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ। गोलांग सी र संरचनागत टाइपिंग, सीएसपी-शैली समवर्ती सुविधाहरू, मेमोरी सुरक्षा सुविधाहरू र फोहोर स collection्कलनको साथ सी र अल्गोलको परम्परामा संकलित र तथ्या .्कित टाइप गरिएको भाषा हो। गुगलले यसका विश्वव्यापी ग्राहकहरूका लागि विभिन्न निःशुल्क र खुला स्रोत भाषा उपकरणहरू र कम्पाइलर विकास गरेको छ।
गोलlang वा गो को दुई मुख्य कार्यान्वयनहरू:
यो प्रोग्रामिंग भाषा पहिलो नोभेम्बर २०० in मा घोषणा गरीएको थियो र गुगल र अन्य समान कम्पनीहरूले बिभिन्न उत्पादन प्रणालीमा प्रयोग गरीरहेको छ। गोलlang्गका दुई प्राथमिक कार्यान्वयनहरू गो कम्पाइलर वा जीसी, र जीसीसीगो वा जीसीसी फ्रन्टइन्ड हुन्। गो कम्पाइलरले ओएस एक्स, बीएसडी, युनिक्स, र लिनक्स जस्ता प्लेटफर्महरूलाई लक्षित गर्दछ, जबकि जीसीसी फ्रन्टइन्डमा स्व-होस्टिंग संस्करण छ। दुबैसँग उनीहरूको विशिष्ट विशेषताहरू छन् र बिभिन्न डाटा एक्स्ट्रक्टरहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
गोको सिन्ट्याक्समा सी बाट परिवर्तनहरू सामेल छन् र कोड संक्षिप्त र पढ्नयोग्य राख्नु हो। गोको संयुक्त शुरुवात वा घोषणा अपरेटरले प्रोग्रामरहरूलाई वेब स्क्र्यापर सजिलैसँग लेख्नको लागि अनुमति दिन्छ। गोलांगले संरचना प्यारामिटरहरू नामद्वारा सुरूवात गर्न र स्लाइसहरू र नक्सा इनिसियलाइज गर्न शाब्दिक वाक्यविन्यास थप्दछ।
बिभिन्न भाषिक उपकरणहरू:
गोलlangमा विभिन्न भाषा उपकरणहरू छन् जस्तै गो बिल्ड, गो टेस्ट, गो एफएमटी, गो गेट, गो भेट, गो रन, गोडोक, गोरेनेम, र गो जेनेरेट। गो बिल्डले वेबसाइटको जानकारीको साथ गोलlang्ग बाइनरीहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। गो टेस्टले विभिन्न युनिटहरू र माइक्रोबेन्चमार्कहरू परीक्षण गर्दछ, र गो एफएमटी ढाँचा कोडका लागि फाइदाजनक छ। Go get मदत प्राप्त गर्दछ रिमोट प्याकेजहरू पुन: स्थापना वा स्थापना गर्नुहोस्, Go Vet स्थिर विश्लेषक हो जसले कोडमा त्रुटिहरू ठीक गर्न मद्दत गर्दछ, गो रन एक्जिक्युटिभ कोड हो, र गोडोक डकुमेन्टेसन प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिन्छ र HTTP मार्फत यसलाई काम गर्दछ। गोरनाम भेरियबल्स र प्रकार्यहरूको नाम बदल्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, र गो जेनरेट कोड जनरेटरहरू आमन्त्रित गर्न मानक तरिका हो।
गोलlang्गका लागि सब भन्दा उत्तम र सरल वेब स्क्रेपर के हो?
GitHub विकास को प्लेटफर्म हो जुन हामी कार्य गर्दछौं। कुनै श doubt्का छैन, यो गोलlang्गको लागि सब भन्दा साधारण र प्रख्यात वेब स्क्रेपर हो। खुला स्रोतबाट व्यवसायहरूमा, तपाईले कोडहरू होस्ट वा समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको प्रोजेक्टहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ र यस सेवाको साथ बिभिन्न सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। थप, तपाईं सजिलैसँग GitHub र यसको सहज API को साथ वेब स्क्र्यापिंग प्रक्रिया अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ। यो उपकरण सबै वेब ब्राउजरहरू र अपरेटिंग प्रणालीहरूको साथ उपयुक्त छ र दुबै सरल र गतिशील वेबसाइटहरू स्क्र्याप गर्न प्रयोग गरिन्छ।
के तपाईं समाचार आउटलेटहरू र ट्राभल पोर्टलबाट डाटा स्क्र्याप गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईंसँग वेब सामग्री म्यानुअल रूपमा स्क्र्याप गर्ने समस्या छ? यदि यो त्यस्तो हो भने, तब GitHub तपाईंको लागि सही विकल्प हो। यो अद्भुत गो वेब स्क्रेपरले तपाईंलाई सबै प्रकारका साइटहरू र निजी ब्लगहरूबाट जानकारी निकाल्न मद्दत गर्दछ। साथै, तपाईं एक समयमा धेरै वेब एक्स्ट्र्यासन कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै समय बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग पर्याप्त प्रोग्रामिंग सीप छैन भने पनि, तपाईं GitHub प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको काम सजिलोसँग गर्नका लागि।